आफैँले पोष्ट गरेको दलबल सहितको फोटोले डा. भट्टराई बने ट्रोल -
आफैँले पोष्ट गरेको दलबल सहितको फोटोले डा. भट्टराई बने ट्रोल
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हालै एक तस्वीर इन्टरनेटमा भाइरल हुँदैछ । उनले खुला स्थानमा पिसाव गरिरहेको जस्तो देखिने उक्त तस्वीर अहिले सामाजिक सन्जालमा यत्रतत्र देखिन्छ ।
उनको साथमा अन्य ब्यक्तिहरु साथै सुरक्षाकर्मी पनि देखिएका छन् । यो तस्वीर राखेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले बाबुराम भट्टराईलाई ट्रोल गरिरहेका छन्।
केहि फेसबुक प्रयोगकर्ता लेख्छन्, ‘पिसाब फेर्न जादा पनि सुरक्षाकर्मी लिएर जान पाइने यस्तो गजबको गणतन्त्र संसारमा कतै होला कि नहोला ? खुल्ला दिसा पिसाब मुक्त नेपाल बनाउन काम्रेडहरुले खुल्ला ठाउमै मल मुत्र त्यागेर बलिदान दिनुपर्ने रैछ ?’ जस्ता आदि तुच्छ व्यंग्य गरिएको छ ।
तर सामाजिक सञ्जालमा जे लेखिए पनि उक्त फोटो चाहिँ बाबुराम भट्टराईले आफ्नै फेसबुक पेजमा केहि दिन अघि ‘गाउॅको शान्त र हरियाली युक्त वातावरणमा कसरी पुनर्वास गर्ने ? योजना बुन्दै !’ भन्ने क्याप्शनमा आफैँले पोष्ट गरेका थिए जहाँ श्रीमती हिसिला यमीलाई पनि सँगै देख्न सकिन्छ । गर्नेले बिरोध गरेपनि उक्त फोटो बन निरिक्षणको हो भन्नेमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन ।